I-logo yangokwezifiso yelebuli yangasese yokwenza ibhulashi 11pcs amabhulashi amnyama wezimonyo asethwe ngezinwele zokwenziwa ezisezingeni eliphakeme.
Eyokuqala:Le modeli yokusetha ibhulashi yokwenza imfashini emakethe, izinwele zemvelo zokwenziwa zithambile futhi zinobuhlobo besikhumba.izinto zokubamba zenziwe ngokhuni oluhle futhi oluqinile.
Impahla esezingeni eliphakeme eyenziwe nge-fiber yokwenziwa, ithambile futhi inethezekile, inikezela ngokuthinta okuncane nangama-bristles wokuqamba ongasebenzi ukuze kuqinisekiswe inqubo yokusetshenziswa bushelelezi nokusebenzisa ulwazi.
Okwesibili uthinta eyodwa yalezi mabhulashi esihlathini sakho, uzomangala ukuthi zithambile kanjani izingilazi. Lesi sethi senzelwe ukulingisa umphumela we-makeup ye-airbrush, okusho ukuthi isisekelo sakho, ukufihla, nokuhlaza kuzosebenza ngokungenaphutha.
Igama lomkhiqizo Izinto Isitayela Izinto ngesethi ngayinye Usayizi Ilogo Iphakheji
Isethi yebhulashi le-Makeup Izinwele zokwenziwa, isibambo sokhuni imfashini 11 Usayizi ngezifiso Logo ngezifiso Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Iqoqo eliphelele lakhiwe ngamabhulashi ayi-11 anezinwele zokwenziwa ezisezingeni eliphakeme ezimise okwenziwe ngevegan. Izibambo zisiza ukunikela ngokulawula kokugcina ekusetshenzisweni kwezimonyo ukukusiza ukuthi udale noma yikuphi ukubukeka kwe-makeup okufisayo. Lesi sibambo sebhulashi senziwe ngendlela efanele.
Izintathu zokuqala:Amakhasimende amaningi asinikeza izibuyekezo eziphakeme kakhulu ngemuva kokuhlolwa, amabhulashi ethu asezingeni eliphakeme, ngoba siyimboni yokwenza izimonyo, futhi sineminyaka engu-15 yokuhlangenwe nakho kobuchwepheshe kulo mkhakha.
Idizayini yamaphethini nemigqa yobuso efanelekayo, ilungele ukwakheka nsuku zonke futhi ingakudalela kalula izimonyo ezingenasici.
Uma ufuna inketho enobungani obuningi, le bhulashi elibalulekile elisethwe kusuka ku-EcoTools liyisidingo. Ziyi-100% vegan futhi zenziwe nge-aluminium esetshenzisiwe kabusha.
Izine zokuqala:Isicelo sethu sokwenza izimonyo ngamathuluzi angenaphutha owasebenzisayo ukushanela, ukujikisa, nokuwahlanganisa endaweni yawo. Noma ngabe udala amehlo aqabulayo noma ama-cheekbones aqoshiwe, lawa amasethi owafunayo ku-arsenal yakho.
Lokhu kusethwa kwebhulashi lokufundisa kufaka phakathi okubalulekile ekusizeni ukuthi udale ibala elingenasici. Isethi ifaka ibhulashi lesisekelo ukusebenzisa isisekelo sakho, ibhulashi lokubhodla ukuze ushelele, ibhulashi lemininingwane yokufihla ukumboza ukungapheleli, kanye nebhulashi lokufihla elikhudlwana elingaphansi kwamehlo naseduze kwendawo yekhala. Ibhulashi lempuphu yefashini linikeza konke ukuqeda ukubukeka okungenaphutha. Wonke amabhulashi angaba esikhwameni esihle sesikhumba esilungele ukuhamba noma ukuvakasha.
Langaphambilini Ukuchazwa okuphezulu okungathathi hlangothi kwe-Eyeshadow Palette - Ukwenza iso-BD15-DW - JOYO
Olandelayo: Ibhulashi le-Makeup-14
Amasethi Wobungcweti beBrashi
JOYO © Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, I-Matte Eyeshadow Palette, I-Lipstick ekhanyayo, I-Mini Lipstick, Khipha ku-internet Cream Eyeshadow, Igolide Lamehlo, Amabhulashi we-Makeup ahamba phambili, Yonke Imikhiqizo